WHO IS WHO IN BURMA: စွမ်းအားရှင် အလိုရှိသည်
နေ့ စဉ်ကြေး ။ ။ သာမာန် လူ တရက် ၃၅၀၀ ကျပ် ၊
ထောင်မှထွက်လာသည့် ရာဇ၀တ်အကျဉ်းသား တရက် ၅၀၀၀ ကျပ်
လုပ်ငန်းနေရာ ။ ။ ပေါက်ကုန်း၊ ပိန္နဲကုန်း၊ ဈေးကုန်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်း စသည့် အင်းစိန်မြို့ နယ် ရှိ ရပ်ကွက် ပေါင်း ၂၂ ရပ်ကွက် အတွင်း နေရာ အနှံ့ အပြား။
တာဝန် ။ ။ ရိုးသား အေးချမ်းစွာ လုပ်ကိုင်စားသောက် နေသည့် ပြည်သူများ ကို မျက်ချေမပြတ် စောင့်ကြည့်ရန်၊ လက်ရှိ အာဏာရှင် စစ်အစိုးရ ကိုဆန့် ကျင်သည့်မည်သည့် လှုပ်ရှားမှုမျိုးကို မဆို အလျင်မြန်ဆုံး နှင့် အထိရောက်ဆုံး အပြတ် ရှင်းပစ်ရန်၊
မသင်္ကာဖွယ်ရာ လှုပ်ရှားသူ၊ တီးတိုးသတင်းပေးသူ၊ စကားပြောသူများ တွေ့ ပါ က ဓါတ်ပုံ ရိုက်ယူရန်။
ရပိုင်ခွင့်များ ။ ။ ကော်လံကတုံး ရှပ်င်္အင်္ကျီဖြူ၊ ကချင် ပုဆိုး၊ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ကင်မရာ၊ နံပါတ် ဒုတ် များ အခမဲ့ ထုတ်ပေးမည်။
အလုပ်ရှိ သောနေ့ များတွင် ထမင်း ၃ နပ် ကျွေးမည်။
ပို့ ဆောင်ရေး ။ ။ ဒိုင်နာ ကားဖြင့် မိမိ နေထိုင် ရာလမ်းထိပ် တွင် ကြို / ချ ပေးမည်။
သင်တန်းများ။ ။ လက်နက် ကိုင် ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ထိမ်းချုပ်ခြင်း၊ ကားပေါ်ဆွဲ တင် ခြင်း၊ ဓါတ်ပုံ မှတ်တမ်းတင် ခြင်း စသည့်လိုအပ် သော နည်းပညာ များ ကို အလျင်းသင့်သလို သင်တန်း ပေးသွားမည်။ ပုံ မှန် သင်တန်း အချိန် များမှာ ညဉ့်နက်သန်းခေါင် လူချေတိတ် ချိန် ဖြစ် သည်။
လျောက်လွှာတင်ရန်။ ။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း မည်သည့် မြို့ နယ်တွင် မဆိုလျောက်ထား နိုင်သည်။ (မယက)၊ ဒုရဲမှူး၊ မြို့နယ်ဦးစီးမှူး၊ (မယက)အတွင်းရေးမှူး၊ (လ၀က)ဦးစီးမှူးနှင့် စည်ပင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ထံသို့တိုက် ရိုက် လိပ်စာ တပ်ပါ။
လူတွေ့ စစ်ဆေးခြင်း။ ။ လျောက်လွှာတင်သူ အားလုံး ကိုလူတွေ့ စစ်ဆေးမည်။ အကယ် ၍ ယခု တကြိမ်တွင် အရွေးချယ် မခံ ရ ပါ က စောင့်ဆိုင်းသူ (waiting list) စာရင်းတွင် ထဲ့သွင်းပေးထား မည်ဖြစ်ပြီး နောက်နောင် အရေးအခင်းများ ပေါ်ပေါက်သော အခါ ဦးစားပေး ခေါ်ယူသွားမည် ဖြစ်သည်။
လျောက်လွှာပိတ်ရက်။ ။ ရက်အကန့် အသတ် မရှိ။
Labels: စွမ်းအားရှင် Swan Arr Shin Militia
အလောင်းဖျောက်တဲ့စရဖ
Where Is Mar Mar Aye ?
လက်နက်မဲ့ အရပ်သားများကို အရှက်ကင်းမဲ့စွာပစ်သတ်ရဲသေ...
သူကသူ့ ကိုကြောက်တာဘဲအေ့ (အာဏာရှင်တို့အကြောက်ဆ...
ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ ကို ကြောက်တာလဲ ဟေ့ (အာဏာရှင်တို့အြေ...
ကြောက်ပါတယ်လေ့ ကြောက်ပါတယ်လေ့ (အာဏာရှင်တို့အကြောက်...
ကြောက်သလားဟေ့ မောင်တို့ ရေ (အာဏာရှင်တိ...
The Towns That Terrify The Authorities Most
အာဏာရှင်တို့ အကြောက်ဆုံးသော မြို့များ ၁
ကြံ့ ကြံ့ ခိုင်တဲ့ ဇာနည်ဘွား